महिलामा २० वर्ष पार गरेपछि आउने ५ बदलाव यी हुन् – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/महिलामा २० वर्ष पार गरेपछि आउने ५ बदलाव यी हुन्
एजेन्सी । उमेरसँगै महिलामा हरेक खालका परिवर्तन आइरहन्छ । यसबेलामा अनेक खालका स्वास्थ्य समस्या समेत उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य जाँच गराइराख्नु पर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । हामी यहाँ २० वर्ष पार गरेपछि महिलामा आउने ५ परिवर्तनबारे बताउँदैछौंः
१. २० वर्षको उमेरपछि हर्मोनको असन्तुलन बढ्दै जान्छ । जसका कारण महिनावारीमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यस्ता खालका समस्या समाधानका लागि प्रशस्तमात्रामा फलफूल र हरियो सब्जी खानुपर्ने हुन्छ । फलफूल र सब्जीमा प्रशस्तमात्रामा आइरन, भिटामिन, मिनरल्स पाइन्छ ।
२. युवतीमा देखिने अर्को समस्या-डन्डीफोर । हर्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण डन्डिफोरका साथै छाला सुख्खा हुने समस्या समेत उत्पन्न हुनेगर्छ । तपाँई यस्तो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने चिल्लो खानेकुरा कम खानुस्। साथसाथै दिनको २ देखि तीन पटकसम्म अनुहार धुँदा उत्तम हुन्छ । यसले अनुहारमा चिल्लोको मात्रा कम हुन्छ र डन्डिफोरको समस्या हट्छ ।
३. उमेरमा परिवर्तनसँगै महिलामा देखिने अर्को परिवर्तन कपाल (रौं) हो । महिलाको गुप्तांग, छाती र पेटमा अस्वाभाविक रुपमा कपाल उम्रन सक्छ । यस्ता अस्वाभाविक कपाल हटाउनको लागि क्रिम या रेजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । रेजरको सहायताले रौंलाई स्थायीरुपमा समेत हटाउन सकिन्छ ।
४. २० वर्षपछि महिलाको मेटाबलिज्म स्लो हुँदै जान्छ र तौल बढ्दै जान सक्छ । तौललाई स्थीर राखिराख्नको लागि चिल्लो र कार्बोहाइड्रेडयुक्त खाना कम गर्नुपर्छ । यस्तै दैनिक बिहान ३० मिनेट मर्निङवाक पनि लाभदायक मानिन्छ ।
५. हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण कपाल सुख्खा तथा जिंग्रिङ्ग बन्न पनि सक्छ । यस्तो बेला ३-४ चम्चा जैतुनको तेलले मालिस गर्दा उत्तम हुन्छ ।